Sidee daruuraha u kala baxaan? | Saadaasha Shabakadda
Horumarka daruuraha Way gaabis tahay, sida iska cad, marka hawsha asalka u ah ay joojiso inay dhacdo. Laakiin arrimo kale ayaa faragelin kara luminta keena oo ah dhibco biyo ah ama kiristaalo baraf ah oo ka soo baxa daruuraha sida kuleylka hawada, roobka iyo isku darka qallajiye hareeraha hawada.
Daruuruhu waa lagu kululayn karaa iyadoo la nuugaayo shucaaca qoraxda ama kan dhulka, laakiin labadaba ifafaale ahaan way daciif yihiin marka la barbar dhigo kululaynta adiabatic.
Tani waa waxa dhici kara haddii hawadu daruurtu ku jirto la dejiyo. Markay heerkulka hawadu kororto, qoyaankeeda ayaa hoos u dhacaya hawaduna way buuxsami kartaa; markaa, qaybaha daruuraha ayaa uumi baxa si ay u noqdaan Uumiga biyaha aan muuqan.
La qorraxda waxay had iyo jeer keentaa kala daadashada daruuraha ay abuureen qalalaasaha. Haddii shucaaca qorraxda ee ku filan uu dhulka soo galo, isagoo kululeynaya hawada u dhow dusha sare, heerka uumiga isku darka ayaa kor u kacaya sidaas darteed, salka Stratus ama Stratocumulus sidoo kale wuu kacayaa. Ka dib, dhumucda daruurta oo ku xaddidan dib-u-noqoshada qalalaasaha ayaa yaraata oo daruurtu aakhirka way baxdaa gebi ahaanba.
ka Isugeynta cimilada wanaagsan, oo ka sameysmay dhulalka lagu soo rogay saameynta insolation, waa dhacdo lama filaan ah. Guud ahaan waxay soo muuqdaan subaxdii, iyagoo gaadha horumarkooda ugu sarreeya galabnimada isla markaana si dhakhso leh u baaba'a markii ay carradu mar labaad qaboojiso dhammaadka maalinta.
Hawada ku xeeran daruur badanaa lama qanciyo. Isku darka daruurta iyo hawadan ayaa markaa waxay sababi kartaa qoyaan qaraabo ah oo aad uga hooseeya 100% waxna soo saari kara uumi bax daruurta dhexdeeda, taas oo ka baxda oo baahin karta.
Macluumaad dheeraad ah - RH, Daruurtii 'Subaxnimo Subax', ifafaale saadaalin hawada ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Sidee daruuraha u kala baxaan?